Kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ, ịchọ ya mma na idozigharị ya, bụ maazị Marcel Ifejiọfọ mere ka a mara nke a dịka ọ gara n'ebe ahụ iji anya ya wee hụ ka ihe si aga. O kwuru na ọrụ ngo ahụ dị àgbà abụọ, kọwaa na kilomita ise n'ime ụzọ ahụ dị kilomita iri bụ nke a rụchapụgoro, ma meekwa ka a mara na a rụchapụla ihe karịrị pasentị iri na asaa nke ọrụ ngo ahụ, ọ bụnadị dịka o kwuru na ọrụ ga-akụrụ ọnụ ebe ahụ oge adịghị anya.
Ọ kpọkuru ma rịọ ụmụafọ obodo ahụ ndị ọrụ ahụ metụtara n'ụzọ dị iche iche ka ha kwụsị ịnagharị ma ọ bụ ịdọghachi ọrụ ahụ azụ, ma kwe nkwa ịña ntị na ilebà anya na mkpesa niile ha wetara nakwa ime ihe ha nwere ike ime, iji hụ na obi dị oke na ngwere mma.
N'okwu nke ya, onyeisi ụlọ ọrụ "Kanubeen Construction Company Ltd." ji ọrụ ngo ahụ, bụ maazị Bechara Karan kwere nkwa na ha ga-ewelitekwu aka n'oge ma hụ na a rụchapụrụ ọrụ ahụ ngwa ngwa tupuu ma ọ bụ oge e kwekọrịtara na ọ ga-akụrụ ọnụ. Ọ kọwara mgbochi na nsogbu ahụ ndị obodo ahụ na-enye ha n'ịrụ ọrụ ahụ dịka ihe kacha ebi ha aka ọjọọ, ma na-adọghachikwa aka elekere azụ ọrụ ahụ. Ọ kpọkukwazịrị ọchịchị steeti Anambra ka ọ zọbanye ụkwụ ma lebara nke ahụ anya ka ya bụ ọrụ wee gaa siriri wee ruo mgbe e sepuru aka na ya.
Na ntụnye nke ya, onyeisi ụlọ ọrụ ''Anambra Project Monitoring & Management Office (APMMO)", Maazị Mike Obuekwe, bụ onye soro wee bịa ilete ka ya bụ ọrụ si aga kwuru ụzọ ahụ ga-eweta ezi mmepe n'obodo ahụ, ma nyekwa aka kwalite ịkọ ugbo na ibuputa ihe a kọtara n'ugbo n'okpuru ọchịchị ahụ niile.